သံလွင်မြစ်ရေ မြင့်တက်လာမှုကြောင့် ဘားအံမြို့တွင်း လမ်းမများတွင် မြစ်ရေ ဝင်ရောက်၊ လမ်းများ ?? - Yangon Media Group
သံလွင်မြစ်ရေ မြင့်တက်လာမှုကြောင့် ဘားအံမြို့တွင်း လမ်းမများတွင် မြစ်ရေ ဝင်ရောက်၊ လမ်းများ ??
ဘားအံ၊ သြဂုတ် ၂ဝ
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့တွင် သြဂုတ် ၂ဝ ရက် နံနက်ပိုင်းမှစတင်ကာ သံလွင် မြစ်ရေ မြင့်တက်လာမှုကြောင့် ဘားအံမြို့တွင်းလမ်းမများတွင် မြစ်ရေဝင်ရောက်ကာ လမ်းများ ရေကျော်လျှက်ရှိကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
”ဘားအံမြို့ထဲက လမ်းတွေ ရေကြီးနေပြီး လမ်းတော်တော်များများက ရေနှစ်ပေ သုံးပေလောက် အထိကို ရေကျော်နေတယ်။ ဘားအံမြို့အထွက်နဲ့ သံလွင်တံတား အဆင်းမြိုင်ကလေးအထိကို ကားအသေးလေးတွေနဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေ သတိထားပြီးသွားနေရတယ်။ အောက်ပိုင်းမြင့်တဲ့ကားဆိုရင် တော့ သွားလို့ရသေးတယ်”ဟု ဘားအံမြို့ခံ ကိုထွန်းထွန်းက ပြောသည်။ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန် ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ သြဂုတ် ၂ဝ ရက် ညနေ ၃ နာရီ တိုင်းတာချက်အရ သံလွင်မြစ်ရေမှာ ဘားအံမြို့တွင် ၉၁၄ စင်တီမီတာသို့ ရောက်ရှိနေပြီး စိုးရိမ်ရေမှတ်မှာ ၇၅ဝ စင်တီမီတာဖြစ်သဖြင့် စိုးရိမ်ရေ မှတ်ထက် ၁၆၄ စင်တီမီတာသို့ ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
သံလွင်မြစ်ရေ ဝင်ရောက်မှု ကြောင့် ဘားအံ အထက(၁)ကျောင်းအား သြဂုတ် ၂၁ ရက်မှစ၍ ခေတ္တ ပိတ်ထားလိုက်ရပြီး ကျောင်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည့်နေ့ရက်အား ပြန်လည်အသိပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အထက(၁) ဘားအံမှ တာဝန်ရှိ သူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် ဘားအံမြို့ရှိ မိုးလုံလေလုံအားကစားရုံ၊ ရွှေယဉ်မျှော်ဘုရား၊ အစ္စလာမ်ကျောင်း၊ အမှတ်(၃) ရပ်ကွက် ဃပခူသညနှ့နူအနမ၊ မဲ ဘောင်ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မပီယဘုန်းကြီးကျောင်း၊ အထက(၃) ဘားအံနှင့် လှာကာ(ဓမ္မရံသီကူးဆိပ်) ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် အိမ်တိုင်ကုန်း ရွာလယ်ဓမ္မာရုံတို့တွင် ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများ ဆက်လက်ဖွင့်ထားရဆဲဖြစ်ကာ ယင်းရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများတွင် အိမ်ထောင်စု ၁၅၆၉ စု၊ လူဦးရေ ၈ဝဝဝ ကျော် ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်နေကြရကြောင်း ဘားအံ မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနရုံးမှ သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လနှောင်းပိုင်းတွင် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းတွင် မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှု ကြောင့် ဘားအံမြို့နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာများတွင် ရေကြီးရေ လျှံမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကာ နေအိမ်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်း၊ လမ်းတံတားများ ရေကျော်ခြင်း၊ ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ယခု တစ်ဖန်တစ်နှစ်အတွင်း ဒုတိယ အကြိမ်မြောက်အဖြစ် ရေကြီးရေ လျှံမှုများကို ကြုံတွေ့နေရခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
စိတ်ကြွ ရူးသွပ်ဆေးပြားများ သယ်ဆောင်လာသော မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦးကို မြန်မာ-ထိုင်းအမှတ်(၁)ခ
(၆၉) ကြိမ်မြောက် မဟာမုနိဘုရားကြီး ရွှေမိုက်ထုတ်ရာ အလေးချိန် ခုနစ်ပိဿာကျော် ရရှိ
အမျိုးသမီးတစ်ဦးထံ သားဥ မှားယွင်းထည့်ပေးခဲ့သည့် သားဖွားဆေးခန်းကို အမေရိကန်စုံတွဲ တရားစွဲ
အရေးပေါ်အခြေအနေကို အတည်မပြုကြောင်း လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်လျှင် သမ္မတထရန့် ဗီတိုဖြင့် ပယ်ချဖွယ်ရ
အမေရိကကို ဆက်ခရီးနှင်မယ့် ဇလာတန်